Nkọwapụta |lọ ọrụ | Anping County Kaixuan igwe anaghị agba nchara Products Co., Ltd.
Ntụziaka ụlọ ọrụ
Pịa Dabara Adaba
Sooks Barb Fittings
Ball Valves na-arịọnụ na mpe mpe akwa
2PC Ball Valve With arịọnụ Kedo akwa
Obere bọọlụ Valves
Anyị, ngwakọta na-arụpụta ihe na azụmaahịa, na-emepụta ma na-ebupụ ngwongwo ọkpọkọ na bọlbụ valvụ kemgbe 2002, ọkachasị na-elekwasị anya na igwe anaghị agba nchara anwụrụ na igwe anaghị agba nchara.
Anyị bụ ndị otu ezinụlọ nwere, Maazị Yan ụmụnna guzobere KX Co. (Anping county KaiXuan anaghị agba nchara ngwaahịa Co., Ltd.) ma wuo osisi ahụ na 2002. Maazị Yan ụmụ nwoke ndị na-eto eto bụ ndị isi KX Co. azụmahịa ụwa. mmepe, atụmatụ, na ahịa.
Onye ọ bụla na-arụ ọrụ na-anwa ike ha kacha mma iji rụọ ọrụ ọkpọkọ ọkpọ na valves iji jee ozi na nzaghachi nye ndị ahịa, anyị niile chọrọ ịrụ ọrụ a mgbe niile na-aga n'ihu, anyị bụ ndị nrụgide kwụsiri ike na ndị na-azụ ahịa na ndị nwere ntụkwasị obi nke gị.
Na-ebuga ngwaahịa dị oke ọnụ ahịa na asọmpi asọmpi. Ma, ọ bụghị otu ihe mere ndị ahịa ji ahọrọ KX Co. Na-ere ngwaahịa bụ otu ihe; nnyefe na izi ezi bu ozo. Na KX Co., a na-ebufe ngwa ngwa, nnyefe a pụrụ ịdabere na ya na ogo ọrụ dị oke mkpa.
Anyị na-eme n'ọdịnihu: ezigbo ọrụ & ọsọ ọsọ, nnyefe ziri ezi, dịka ndị ahịa anyị na-atụ anya n'aka anyị: "Ego na ọnụ ahịa!"
Ngwaahịa dị mma na-ekwu maka onwe ya na ọ bụ echiche bụ uru.
Anyị Manufacturing Plant
Anyị factory ekpuchi ebe ndị 20000 square mita, mgbatị ogbako nke 5000 square mita, machining ogbako nke 5000 square mita.
Ọ nwere ụlọ ọrụ ọkachamara ọkachamara na ụlọ ọrụ ọrụ ntanetị iji nye ndụmọdụ ọkachamara maka ogo ngwaahịa na ahụmịhe ndị ahịa.
Ike mmepụta kwa ọnwa bụ tọn 100. Anyị nwere nso nke SP114 ebu ngwaọrụ na ISO4144 ebu ngwaọrụ, wdg. Onwe-mepụtara n'ụzọ zuru ezu akpaka ebu nwere kwa ụbọchị na-emeputa nke 3,000 wax akụkụ, nke bụ ugboro atọ na nke ntuziaka Ebu.
Nkwupụta Mgbanwe Kwa Afọ
Iji nye ndị ahịa ngwaahịa na ọrụ dị oke ọnụ ahịa.
Inye ohere kachasị mma maka ndị ọrụ na ọkwa ọ bụla nke ọrụ ha ịrụ ọrụ ogologo oge na ike iji nweta ikike ha kachasị elu. Iji mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịkwuo mma. Iwulite ulo oru anyi n’ime ulo oru na-eduga ka iwalite imeputa ihe ma meputa oru ohuru, imeputa uzo ahia nke ngwa ahia na oru ndi nwere ike imezu ihe nke odinihu.
Iji mepụta ndụ kwụsiri ike ma dị elu maka ndị ọrụ niile na ezinụlọ ha.
Uru anyị bara
Anyị na-enye ngwaahịa ndị pụtara ìhè na ọrụ na-enweghị atụ na, ọnụ, na-enye ndị ahịa anyị uru bara uru.
Anyị na-akwado ụkpụrụ kachasị elu nke iguzosi ike n'ezi ihe n'omume anyị niile.
Anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ iji gboo mkpa nke ndị ahịa anyị na iji nyere ụlọ ọrụ aka mmeri.
Nkwanye Peoplegwù Maka Ndị Mmadụ
Anyị ji ndị anyị akpọrọ ihe, na-agba ume maka mmepe ha ma kwụọ ụgwọ maka arụmọrụ ha.
Anyị na-egosipụta ike siri ike iji merie n'ọma ahịa na akụkụ niile nke azụmahịa anyị.
Anyị ga-abụ onye ahịa azụmaahịa kachasị jiri kpọrọ ihe nke ndị ahịa anyị niile.
Onyeisi: +86 15633514444
Ahịa ： + 86-318-7532676
Ngalaba Production ： + 86-318-8095396
Investment mgbatị a na-akpọ furu efu wax mgbatị ma ọ bụ nkenke mgbatị, nke bụ a metal akpụ usoro na-emepụta akụkụ na uko tolerances, mgbagwoju n'ime cavities na kpọmkwem akụkụ ....
1. Ezigbo ịdị ọcha nke igwe anaghị agba nchara ọkpọkọ & oyiyi akwa Onye ọ bụla maara na igwe anaghị ata nchara bụ a mma ike ihe nke nwere ike kụnyere n'ime ahụ mmadụ ....
01High-quality steel steel threaded pipe fittings: 1. Mgbapu nke eri kwesịrị ịdị nkọ, ọbụlagodi ma na-egbu maramara. 2. Enwere ike iji aka metute ihe di na eri, it ...
Copyright - 2019-2020: Anping County Kaixuan Stainless Steel Products Co., Ltd. Ikike niile echekwabara.